Ny fanjakana afrikanina atsinanana dia mandray ny drafitra fanarenana ny fizahan-tany COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny fanjakana afrikanina atsinanana dia mandray ny drafitra fanarenana ny fizahan-tany COVID-19
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny minisitry ny faritra afrikanina atsinanana dia nihaona saika teo ambany fitantanan'ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fiainana an-tany Kenyan, Najib Balala ary nanaiky handray ny fepetra fanarenana izy rehetra.
Nanaiky ny handray ny fomba iraisana sy mandrindra ny minisitra fanarenana ny fizahantany ny minisitra
Ny drafitra dia miantso ny famoronana fonosana manaitaitra mikendry ny handrehitra indray ity sehatra ity.
Miantso ny fanohanana ny fampiasam-bola fizahan-tany ao amin'ny faritra, ao anatin'izany ireo orinasa kely sy bitika.
Fametrahana ho sitrana amin'ny fiantraikan'ny areti-mandringana COVID-19 amin'ny fiarovana ny fizahan-tany sy ny bibidia, ny Faritra afrikanina atsinanana dia namolavola sy nanangana ny drafitra fanarenana fizahan-tany any amin'ny COVID-19 izay mitady hamelomana indray ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany voadona mafy noho ny aretina manerantany.
Anisan'izany ny famoronana fonosana manaitaitra izay mikendry ny handrehitra indray ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ary ny fanohanana ny fampiasam-bola fizahan-tany any amin'ny faritra, anisan'izany ireo orinasa kely sy bitika.
Nanaiky ihany koa ny minisitra handray ny fomba iraisana sy mandrindra mikendry ny fanarenana fizahan-tany izay mitaky fanelanelanana kendrena amin'ny fanamafisana ireo fepetra novolavolaina sy ampiharina amin'ny sehatra nasionaly.
Mbola nodinihin'izy ireo ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny famerenana ny serivisy amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny toeram-pitsaboana.
Nandritra ny fankatoavana ireo torolàlana dia nanaiky ireo minisitra fa ilaina izany EAC torolàlana mifanaraka amin'ny famerenana ny serivisy momba ny fizahan-tany sy fandraisam-bahiny ao amin'ity faritra ity.
Nanamarika ireo minisitra fa ny torolàlana isam-paritra dia hanampy amin'ny fiantohana ny firaisan-kina amin'ny famerenana ny serivisy fizahantany ary hanampy amin'ny fananganana ny fahatokisana sy fahatokisana an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena mitsidika ny faritra.
Anisan'ny torolàlana stratejika sy ny hetsika stratejika mifanaraka amin'izany amin'ny paikadim-barotra momba ny fizahan-tany ataon'ny Vondrona Afrikanina Atsinanana ny fampandrosoana ireo vokatra fizahan-tany misy fizahan-tany isam-paritra sy iraisam-pirenena.
Ny torolàlana hafa dia ny marketing an'i Afrika Atsinanana ho toerana fizahan-tany isam-paritra itsinjaram-pahefana any Afrika, manome marika an'i Afrika Atsinanana ho toerana fizahan-tany lehibe ary manamafy ny politikam-pivarotana sy ny rafitra andrim-panjakana ary manatsara ny famatsiam-bola ho an'ny fizahantany any Atsinanana sy ny fampiroboroboana.